Date: 11 février 2018 - 21:20
Date: 11 février 2018 - 22:10
aldien> Tsy sanatria izao miaro an'ilay mpitaiza fa saingy kosa matoa izy mahavita an'izany de misy antony ao mety no traiterny namanao ratsy izy. Ianao tsy hoe miara mimpetraka @ny namanao 100% fa mihaona indraindray ka tsy mahalala izay fomba fitondrany azy ao. Samihafa anie ny olona e rehefa @ny namany izy anjely latsaka antany fa rehefa @ny mpiasany izy dia hafa ihany koa. Ka ilay hitanao ilay endrika anjely fa tsy ilay mampitahotra hitany ilay mpiasa isan'andro.
Lazao ny namanao fa ny secret fitondrana olona dia mila mitondra olona tsara ianao dia hajainy olona koa ary tsy hisy anao ratsy anao izany eo raha mahay mitondra olona tsara ianao.
Ary koa tsy ny olona rehetra akory no ratsy sahala @ny hoe ianao izao manana ny toetranao ny namanao hafa ihany koa dikany dia hoe misy foana ny ratsy sy ny tsara eto antany fa tsy hoe mitandrema ianareo @ireny mpitaiza ireny nefa mety avy any @ny mpampiasa ny faute nahatonga ny mpiasa ho tezitra ka nanao zavatra ratsy azy.
Date: 12 février 2018 - 09:24
aldien << esory ilay ""correction automatique""" am ordi na phone-nao fa hitako mandreraka be !!!
- midira ao am parametres,..., clavier => desactiveo ny ""correction auto""" !!!
>> zay fa dia mazoto !!!!
Date: 12 février 2018 - 10:29
Olona sahy manapoizina tsotra izao kosa ve dia mbola arovana ihany ry tsy miaro à?
aldien >>>>> Nangalariny angaha ny vadinao?
Par: vivien 77
Date: 13 février 2018 - 17:44
Mila mailo koa amin'ny patirao manakarama kely nefa be exigence , ao ny mpanolana , ao ny tsy manome karama, ao ny tsy manome sakafo ara-dalàna, ao ny mampaory mpanampy amin'ny tany !misy Antony ao matoa manondrana izy!
Date: 13 février 2018 - 23:27
vivien77> tena tohanako ny hevitrao marina 100% ny zavatra lazainao.
Mitovy hevitra aminao mihitsy izao hoe misy antony ao matoa izy manondrana izy. Tokony mba alaina ambavany koa lay mpanampy ahahalalana ny marina fa ny vy akory tsy mikitrana irery.
Date: 15 février 2018 - 08:18
misy atony ao matoa manao an zan izy. iza ny olona faly manapozina zan? misy antony ao ary mety zay no ts fatatrao